मङ्लबार, ६ अशोज २०७७
चितवन ३१, भदौ २०७७
लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेका सौराहाका होटल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारले असोज १ गतेदेखि होटल खोल्न दिने निर्णय गरेसँगै यहाँका व्यवसायीले तयारी थालेका हुन । गत चैत ११ गतेदेखि बन्द भएका होटल साउन १५ गते खुलेका भए पनि सोही महिनाको २८ गतेदेखि पुनः बन्द भएका थिए । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार सरकारले होटल सञ्चालन गर्न दिने भएसँगै आजबाट तयारी थालिएको छ । कर्मचारी बोलाएर होटलहरुले सरसफाइसँगै आवश्यक व्यवस्थापन गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।
सौराहामा ११० होटल छन् । यसैगरी साना ठूला एक सय हाराहारीका रेष्टुरेन्ट छन् । सौराहामा होटलमा प्रत्यक्षरुपमा पाँच हजार ५०० भन्दा बढी कामदारले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् ।RSS
के हो कोरोना ? विश्वव्यापी नियन्त्रण प्रयास,…
राजस्व छली गर्नेहरू फेरि सक्रिय हुन थाले
काठमाडौं ६, असोज २०७७। लामो समयको लकडाउन खुलेसँगै पुनः राजस्व...
काठमाडौँ –६, असोज २०७७ चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा प्याज, आलुसहित...
कांग्रेसले काम गर्छ, नेकपाले प्रचार !
लक्ष्मण गौतम नेपाली कांग्रेसले काम गर्यो तर आफ्नो कामको प्रचार...